Pakistana, Balochistan : Tsy Voavatsy Amin’Ilay Entona Voajanahary Vokarina Ao Aminy , Nahoana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2015 14:47 GMT
Nosoratan'i Feroz Jan tao amin'ny Urdu ary nadikan'i Salman Latif ho an'ny PakVoices ity lahatsoratra ity. Eto ambany eto ny dikanteny iray.
Nahitana entona natoraly tao amin'ny fitrandrahana enton'i Sui tamin'ny 1952 ary namatsy faritra maro tany Pakistan io entona io nanomboka tamin'ny 1955. Nantsoina hoe ‘ enton'i Sui’ ilay entona natoraly any Pakistana hita tany amin'ny fitrandrahan'i Sui. Mitondra ny anarana hoe ‘Sui Southern Gas Company ‘ sy ‘Sui Northern Gas Company‘ ireo orinasam-panjakana roa lehibe mpitsinjara entona ao Pakistana.
Tsara lazaina eto fa ny faritanin'i Punjab sy Sindh no faritany voalohany nahazo ny famatsiana avy amin'ny enton'i Sui. Etsy ankilan'izany, 60 taona izay no nahitana ilay entona nefa hatramin'izao fotoana izao dia mbola tanàna kely 14 amin'ny distrika 30 any Balochistan fotsiny no misitraka ny famatsiana ny entona natoraly. Sui, izay enina kilaometatra sy sasany monja avy eo amin'ny toerana nahitana ilay entona aza tsy voavatsy entona akory ary dia voatery mampiasa kitay sy arina ny olona ho fandrehitra.
Amin'izao fotoana izao, maro ireo fampanantenana atao mba hanovàna ny tanànan'i Gwadar ho renivohitry ny indostria, ny varotra ary ny fandrosoana. Saingy mampalahelo fa tsy ananan'i Gwadar ireo sasany amin'ny singa fototra tena ilaina toy ny rano madio. Tsy izany ihany, fa ny 10%-n'ny mponina fotsiny no misitraka ny famatsiana entona raha toa ka miandry ny fahavitan'ireo fampanantenana goavana ny ambiny.